बुद्धभूमिकाे आईपीओ खुल्यो ,आजदेखि आवेदन दिन सकिने, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ताका आवेदन दिने? - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ बुद्धभूमिकाे आईपीओ खुल्यो ,आजदेखि आवेदन दिन सकिने, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ताका...
बुद्धभूमिकाे आईपीओ खुल्यो ,आजदेखि आवेदन दिन सकिने, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ताका आवेदन दिने?
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले आज साेमबारबाट सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री सुरु गरेकाे छ। कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो।
कम्पनीले ८ लाख कित्ता आईपीओ निस्काशन गर्नेछ। कम्पनीले निस्काशन गरेको कुल सेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीको उक्त सेयरमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । सो सेयरमा सर्वसाधारणले असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा २५ असाेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिने कम्पनीको धितोपत्र निस्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ।
कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
आईपीओ निस्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपि आईआर डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
कति कित्ताका लागि दिने आवेदन ?
बुद्धभूमि नेपालको आइपीओ पाउन लगानीकर्ताले भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ७ लाख ४४ हजार कित्ता मात्र सेयर निष्कासन गरेकाले माग भन्दा निकै धेरै आवेदन पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय आइपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो पटक प्रत्येक आइपीओमा २४ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले आवेदन दिन थालेका छन् ।
बुद्धभूमिको आइपीओ न्यूनतम १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा ७४ हजार ४०० जनाले मात्र सेयर हात पार्नेछन् । यस आधारमा हेर्ने हो भने बुद्धभूमिको आइपीओमा पनि १० कित्ताका लागि आवेदन दिँदा पर्याप्त हुने देखिन्छ । यद्दपि, कम्पनीले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
Previous articleमानुषी लघुवित्तको आईपीओ सोमवारदेखि दोस्रो बजारमा, कति पायो ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
Next articleबुद्धका दुई उडानमा प्राविधिक गडबडी, एउटा ग्राउन्डेड अर्को बल्लतल्ल अवतरण, प्राविधिक जाँच हुँदै
साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेडले असोज ६ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो। उक्त साधारण सेयर (आईपीओ) को बाँडफाँड हिजाे (असाेज १७...
अहिलेसम्म दशैँका लागी नयाँ नोट साट्नु भएको छैन? छैन भने यसरि साट्नुहोस।
TLN Post - October 3, 2021 0
नेपालीहरूको महान चाड दशैँ नजिकिएसँगै गत असोज ४ देखि नयाँ नोट सटही गर्न सकिने भैरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैँ तिहारका लागि असोज...
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री खुला, कस्तो छ कम्पनी? कति दिने आवेदन ?
TLN Post - October 1, 2021 0
सर्वसाधारणका लागि न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शुक्रवारदेखि साधारण सेयर बिक्री खुला गरेको छ ।कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २२ करोड ५० लाख बराबरको २२...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ सोमवारदेखि दोस्रो बजारमा, कति पायो ओपनिङ्ग रेञ्ज ?
TLN Post - September 26, 2021 0
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर (आईपीओ) असोज ११ गते सोमबारदेखि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार खुला हुने भएको छ । दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि लघुवित्तले...
कोरोनाभाइरसको भियतनामी भेरिएन्ट हावाबाट पनि सर्न सक्ने
दुर्गा प्रसाईंले गरे उज्जवल थापाको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी, १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा